राजविरले जिते उपाधी – Khel Dainik
राजविरले जिते उपाधी
काठमाडौं (खेलदैनिक) । राजविर मानन्धर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिता २०२१ को ब्वाईज यु – १४ तर्फको उपाधी उचाल्न सफल भएका छन् ।
आईतबार भएको फाईनलमा मानन्धरले आयुश्मान हजुर घलेलाई ६–०, ६–३ ले पराजित गर्दै उपाधीमा आफ्नो नाम कोर्न सफल भएका हुन् । तर उनी युगलतर्फ भने सेमिफाईनलमा पराजित भएका छन् । युगल तर्फ प्रनभ महर्जनलाई जोडी बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रेका उनी दर्शिल श्रेष्ठ र श्रीजन भट्टराईको जोडीलाई वाक ओभर प्रदान गर्दै सेमिफाईनमानै यात्रा टुङ्गयाउन बाध्य भए ।
गणेशमान सिंह फाउण्डेशनको आयोजना तथा नेपाल टेनिस संघको आयोजनामा भएको प्रतिस्पर्धाको ब्वाईज १२ तर्फ दर्शिल श्रेष्ठले उपाधी उचाले । उनले बोरिस अधिकारीलाई ७–५, ६–२ ले पराजित गर्न सफल भएका हुन् । यस्तै सोही उमेर समूहको छात्रातर्फ समृद्धि महर्जनले जित हात पारिन् । महर्जनले फाईनलमा शिभाली गुरुङ्गलाई ६–३, ७–५ ले पाखा लगाउँदै जितलाई आत्मसाथ गरेकी हुन् ।
सातदोवाटोस्थित टेनिस कोर्टमा भएको जुनियर तर्फको अन्य खेलमा छात्रा यु – १४ तर्फ सुनिरा थापा र आद्या पौडेल उपाधी निकट पुगेका छन् । सुनिराले जेनी खड्कालाई ६–४, ६–१ ले पराजित गर्दै उपाधीका लागि पौडेल संगको भेट पक्का गरेकी हुन् ।
पौडेलले प्रशंस मोक्तानलाई ६–३, ६–३ को सेटमा पराजित गरिन् । यस्तै छात्र तर्फ यु – १४ तर्फ आयुश्मान हजुर घले र सक्षम श्रेष्ठको जोडी तथा दर्शिल श्रेष्ठ र श्रीजन भट्टराईको जोडी फाईनल प्रवेश गरेका छन् ।
घले र श्रेष्ठको जोडीले स्लोक खड्का र श्रीयोग आचार्यको जोडीलाई ६–१, ६–१ को सेटमा तथा दर्शिल र श्रीजनको जोडी राजवीर मानन्धर र प्रनभ महर्जनको जोडीबाट वाक ओभर प्राप्त गर्दै फाईनल प्रवेश गरेका हुन् ।
यस्तै यसै उमेर समूहको छात्रा युगल तर्फ आध्या पौडेल र समृद्धि महर्जनको जोडीले फाईनलमा स्थान बनायो । पौडेल र महर्जनको जोडीले मालाश्री श्रेष्ठ र कृषाको जोडीलाई ६–२, ६–२को समान अन्तरले पराजित गरेका हुन् । यसैगरि सुनिरा थापा र प्रशंसा महर्जनको जोडीले पनि फाईनल यात्रा तय गरे । थापा र महर्जनको जोडीले जेन्नी खड्का र कर्मिष्ठा एन. एसको जोडीलाई ६–२, ६–२ सेटमा पराजित गर्दै फाईनल प्रवेश गरेका हुन् ।
त्यस्तै महिला युगल तर्फ प्रेरणा कोईरालाल र सलोनी तामाङ्गको जोडी तथा अभिलाषा बिष्ट र ईरा एम. राउतको जोडी उपाधी निकट पुगेका छन् । प्रेरणा र सलोनीको जोडीले रयना शाह र प्रकृती श्रेष्ठको जोडीलाई ६–२, ६–१ ले तथा अभिलाषा र ईराको जोडीले अज्जा रेग्मी र ईभा अधिकारीको जोडीलाई ६–०, ६–१ ले पराजित गरे ।
पुरुष ५५ बर्ष माथिको स्पर्धामा कमल थापाले सागर केसीलाई ६–०, ६–० ले पराजित गर्दै उपाधीका लागि विमल कुमार गुरुङ्ग संगको भेट पक्का गरेका हुन् । विमलले ध्रुव गुरुङ्गबाट रिटायर्ड हर्टको आधारमा जित निकाले । २–० को अवस्थामा ध्रुव रिटायर्ड हर्ट भएका थिए ।
← सक्सेस हिरा डाँगी स्मृति कपको फाइनलमा जाडेन र आजमीलाई किड ट्राईथालन उपाधी →
घलानको दुई गोलमा गोर्खा ब्वाईजलाई तीन अंक कार्तिक १४, २०७८
कप्तान भरतको गोलमा आर्मीको पहिलो जित कार्तिक १४, २०७८
अन्तरपालिका पुरुष फुटबल शुरु कार्तिक १४, २०७८
आयोजक युनिकलाई उपाधि कार्तिक १४, २०७८
बुटवल युनाइटेडको शानदार शुरुवात, फर्साटिकर र लिस्नुको बराबरी कार्तिक १४, २०७८
उपाधिका लागि वार्ड नम्बर ३ र ५ भिड्ने कार्तिक १४, २०७८